Manicure mazano ayo arikutsvaira zhizha rino 2021 | Bezzia
Susana godoy | 02/06/2021 12:00 | Misumari
Kunyangwe zhizha 2020 yanga isiri sezvaitarisira, zvinoita sekunge muna 2021 tinogona kutanga kurota kunyangwe zvishoma uye tichigara tine musoro. Naizvozvo, kuitira kuti usimudze nguva zvishoma, hapana chakafanana nekubheja iwo manicure mazano ari kuenda kutsvaira ino zhizha 2021, iyo yatove kutenderera kona.
Ndokusaka kuitira kuti usazosara kumashure, tinokuunzira nhevedzano yemazano akakosha, anodikanwa uye auri kuzoda. Saka kuti iwe ugone kuenda kusanganisa kupedzisa kweyaunofarira manicure nemavara akanakisa. Iwe unoda here kuziva kuti iri nezvei?
1 Rudzii rwembambo rwunoshandiswa muzhizha rino 2021
2 Chipikiri maitiro 2021 kubheja pane zvakasikwa
3 Kudhindwa kwemaruva ndeimwe yemafungiro emanicure ari kutsvaira
4 Geometric motifs mumaoko ako
5 Polka madota zvakare achave ako akakodzera manicure mazano
Rudzii rwembambo rwunoshandiswa muzhizha rino 2021
Tinotanga neimwe yenyaya dzakakosha kwazvo, iri kutaura nezve iro kara rinozove rakanyanya mwaka uno. Naizvo, ivo vanobheja pingi, mune yayo yese shades. Asi ichokwadi kuti yeyero ruvara ichaitawo basa rakakura. Mune mamwe mazwi, iyo inopenya mavara ndiyo yatichapfeka muzhizha rino. Chinhu chatakatotarisira nekuti tinoda kupenya kwakawanda uye mufaro wakawanda, zvakare muzvipikiri zvedu. Zvirokwazvo bubblegum pink inosanganiswa nechena ichaumba inopfuura yakakwana manicure, pamwe neyero kupa hupenyu kune mamwe maruva. Haisi iyo pfungwa huru here?
Chipikiri maitiro 2021 kubheja pane zvakasikwa
Ichokwadi kuti kana iwe uchida kuzvipfekedza zvakanongedzwa, isu hatizobvise iyo fungidziro. Asi ndezvekuti pamusoro pesarudzo dzese dzatinadzo, zvinoita sekunge zhizha rino riri kubheja pane zvakasikwa. Zvipikiri zvipfupi, zvine maumbirwo evhavha zvishoma, ndizvo zvinopa maoko ako mamwe maitiro.. Ichokwadi kuti muzhizha isu tinowanzo kuve nezviitiko zvakawanda uye nekudaro, tinoda kuchinja manicure edu. Zvino hongu, iwe unozokwanisa kusarudza nenzira inokodzera kune iwo magadzirirwo aunoda zvakanyanya. Rangarira kuti zvipikiri zvakashongedzwa zvakanaka, zvine polish yakakosha senge isina kupfeka kana chena uye kubata kwekupenya kunogara kuchikunda.
Kudhindwa kwemaruva ndeimwe yemafungiro emanicure ari kutsvaira
Pasina kupokana, kupedzisa nemaruva kunogara kuri imwe yeaya manicure mazano asingambofa akabuda muchitaera. Naizvozvo, hazvikuvadze kuti isu tinoshandura masitaera. Semuyenzaniso, madhiri madiki anogara ari rimwe remaruva akanyanya kukumbirwa, kunyangwe iwe uchigona kudhirowa mamwe peturu kana kurega iwe uchitakurwa nezvimiti. Izvi zvinotipa yakanaka yehunyanzvi yekupedzisa uye zvakare, yakakwana kuti tikwanise kuratidza pane yakatarwa nguva. Uye zvakare, sekuziva kwako, iwe unogona kugara uchigadzira dhizaini imwechete mbambo kana mune akati wandei. Zviri kwauri!
Geometric motifs mumaoko ako
Iyo ndeimwe yesarudzo idzo dzisingagone kuoneka. Ehe, pamwe ichokwadi kuti haina nguva yakatsanangurwa nekuti mune yega yega uye yavo ichave tsika. Ndokusaka muzhizha zvinoita sekunge anofarira kuyangarara zvine simba kupfuura nakare kose. Chii chimwe, kana mamwe ma psychedelic brushstrokes akawedzerwa, kunyange zvirinani. Iwe unogona kuzvibatanidza mune akareruka uye ane simba matoni kuti aite kuti vamire pachena kupfuura nakare kose. Chokwadi nenzira iyoyo iwe unozowana mhedzisiro yekugadzira.
Polka madota zvakare achave ako akakodzera manicure mazano
Sezvakaita nemageometric motifs, polka madhodhi haazi mamwe eaya mazano anozotishamisa asi ivo vanoda kuve padivi pedu kunyangwe muzhizha. Naizvozvo, inotipa sarudzo huru nekungofunga nezvazvo. Nekuti ndiyo nguva iyo yatinokwanisa kubatanidza iwo mavara atinonyanya kufarira kana kuti tirege kutorwa neavo vatinotaura vakaita sepingi uye yero kuti tigadzire maitiro. Iwo ane mukurumbira iwo ave kutosarudza mapolka madota ane gradient maitiroHaisi iyo pfungwa yakanaka here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Misumari » Iwo manicure mazano ari kuzotsva muzhizha rino 2021